Otomatiga guriga: xaalada hada ka jirta waaxda iyo faa iidooyinka nidaamyada otomatiga guryaha | Wararka Gadget
Xaaladda hadda jirta iyo faa'iidooyinka otomatiga guriga
Nacho Cuesta | | Otomaatiga guriga
Qormadan, waxaan isku dayi doonnaa inaan ku dulmarno xaaladda hadda jirta a qaybta soo ifbaxaysa oo xiiso leh sida otomaatiga guriga. Iyo marka ugu horreysa, waxay ku habboonaan laheyd in la isku dayo in la qeexo waxa otomaatiga guriga uu yahay.
1 Waa maxay otomaatiga guriga?
2 Faa'iidooyinka ay bixiso otomatiga guriga
2.1 Otomaatiga guriga
2.1.4 Isdhexgalka xarumaha
2.1.5 Isdhexgalka isticmaalaha
2.2 Otomaatiga guriga ee qaybta Tertiary
3 Noocyada nidaamyada otomatiga guryaha
3.1 Wired iyo wireless
3.2 Nidaamyada lahaanshaha ee caadiga ah iyo kuwa caadiga ah
4 Maxay ku xiran tahay rakibidda otomaatiga guriga?
Waa maxay otomaatiga guriga?
Marka la soo koobo, waxaa lagu qeexi karaa a nidaam awood u leh maaraynta iyo xakamaynta rakibidda dhisme kasta (gudaha iyo dibeddaba) sida qaboojiyaha, laydhka, matoorrada, amniga, maqalka, iwm.
Qaybta muhiimka ah ee qeexitaankeeda waxay ku jirtaa is dhexgalkaSi kale haddii loo dhigo, nidaamka kuleylka ee laga xakameyn karo internetka maahan nidaam otomatiga guryaha ah, maadaama uusan awoodin inuu xakameeyo inta ka hartay rakibidda. Tani waa arrin aad muhiim u ah tan iyo marar badan oo macaamilku ku jahwareersan yahay astaamaha "otomatiga guriga" ee qalabka aan runti ahayn.
Faa'iidooyinka ay bixiso otomatiga guriga
ka Faa'iidooyinka uu bixiyo nidaamka otomatiga guriga aad ayey u ballaadhan yihiin, waana muuqataa haddii farqiga u dhexeeya qaybaha gudaha iyo kuwa jaamacadeed. Caqli ahaan, sababaha iyo faa'iidooyinka ka mid noqoshada otomaatiga guriga way ku kala duwan yihiin hadba nooca iyo isticmaalka dhismaha.
Marka laga hadlayo guri, rakibaadda guud ahaan waxay kuxirantahay raaxada iyo raaxada, inkasta oo dhinacyo ay ka mid yihiin amniga iyo keydinta tamarta ay sidoo kale soo farageliyaan. Tan awgeed, tusaalooyinkaani waxay u adeegaan:
Hal muuqaal wuxuu ka kooban yahay xakamaynta dhowr rakibo oo leh hal amar. Tusaale ahaan, iyadoo la adeegsanayo dalab, waxaa suuragal ah in TV-ga lagu shido kanaalka aan jecel nahay, lagu shido nalalka 30% xoojinta, hoos loo dhigo indhoolayaasha lana dhigo heerkulka qolkaas 21º.
Dareenka abuur jawi ama muuqaal iftiin leh qolka dhexdiisa waa, isla mar ahaantaana mid raaxo leh, runtii cajiib ah, maadaama uusan macmiilku ahayn inuu dhex maro qolka si uu u helo jawiga saxda ah.
Waa macquul xakamee AC iyo kululaynta labadaba hal qalab oo dhexe, la tashiga heerkulka kala duwan oo si hufan loogu maareeyo.
Tusaale ahaan, runtii waa waxtar iyo wax ku ool in la sameeyo hoos u dhigista guud ee indhoolayaasha markii guriga laga baxayo. Sidoo kale waa wax aad u badan daabacaadda jadwalka waqtiga in hoos loo dhigo ama loo kiciyo waqti cayiman. Tani waxay sidoo kale keydisaa tamarta saacadaha ay qorraxdu toos u gasho daaqadaha.
Haysashada "dhammaan tas-hiilaadka oo dhan" waxay u keentaa raaxo weyn qofka isticmaala, kaasoo gacanta ku haya waraabka, gelitaanka fiidiyowga, barkadda dabaasha, albaabbada, iwm.
Tani waa mid ka mid ah dhinacyada muhiimka ah, maadaama ay tahay maxay runti waxay bixisaa dareenka xakameynta iyo raaxada. Iyada oo loo marayo shaashadaha taabashada, farsamooyinka gaarka ah ama barnaamijyada moobiilka, waxaa suurtagal ah in la sameeyo xakamayn ballaaran oo rakibidda ah, oo ay ku jiraan xakamaynta dhammaan maqalka, maareynta aalado badan oo suuq ah.
Ugu dambeyntii, amniga guriga ayaa laga qaadaa tiro intaa ka badan, maaddaama aan hubinno, tusaale ahaan, go'itaanka biyaha iyo / ama gaaska haddii ay dhacdo in uu dillaaco, ogaanshaha dabka, iwm.
Otomaatiga guriga ee qaybta Tertiary
Waan fahamsanahay sida qaybta saddexaad dhismayaasha hoteelada, xafiisyada, matxafyada, dowlada, warshadaha, iwm.
Dhismaha noocan ah, ka mid noqoshada otomaatiga guriga aasaasiyan wuxuu ku xiran yahay dhimista kharashka iyadoo loo marayo keydinta tamarta iyo dayactirka xarumaha. Kuwaani waa tusaalooyin:
Iyada oo loo iftiimiyo: Dhismayaal badan, ma jiraan wax shido, maxaa yeelay boqolleyda xoogga nalalka si iskiis ah ayey u kala duwan yihiin iyadoo ku xiran hadba wixii ka soo baxa dibadda.
Iyadoo loo marayo indhoolayaasha iyo indhoolayaasha: Xaaladdan oo kale, "lakab" labaad oo waji ah ayaa la soo saaray, oo awood u leh inuu joojiyo ama ka faa'iideysto shucaaca qoraxda iyada oo loo marayo hawlgal otomaatig ah.
Iyada oo loo marayo qaboojiyaha: oo leh dhinacyo ay ka mid yihiin sida otomaatigga ah ee qaboojiyaha marka daaqadu furnaato in ka badan 3 daqiiqo ama aan dad lagu arkin qolalka qaarkood.
Iyadoo loo marayo barnaamijka dhexe: Xaaladdan oo kale, shaqaalaha dayactirka ayaa awoodi doona inay eegaan xaaladda mid kasta oo ka mid ah xarumaha, iyo sidoo kale inay hawlgeliso iyadoon loo baahnayn inay ku wareegaan dhismaha.
Noocyada nidaamyada otomatiga guryaha
Waxaa jira soosaarayaal iyo nidaamyo badan kala duwan iyo noocyo kala duwan, kuwaas oo inta badan ku kala duwan tiknoolajiyada isgaarsiinta. Qaybtani waa xoogaa farsamo, laakiin waxaan isku dayi doonaa inaan si kooban u dulmarno farqiga u dhexeeya noocyada nidaamka jira.
Wired iyo wireless
Kala duwanaanshaha furaha ayaa ah in walxaha nidaamka ay ku xiriiraan fiilooyin ama wireless. Maanta, Nidaamyada fiilooyinka leh ayaa ah kuwa ugu adag iyo kuwa bixiya xalka ugu badan ee isticmaalaha ugu dambeeya.
Nidaamyada wireless-ka (badanaa Zigbee, inta jeer ee raadiyaha, Wifi iyo Zwave) ayaa ka kalsooni yar kuwa fiilooyinka leh, laakiin sidoo kale xalka ugu fiican ee mashaariicda yaryar halkaasoo aysan macquul aheyn in laga fuliyo shaqooyin.
Nidaamyada lahaanshaha ee caadiga ah iyo kuwa caadiga ah
Farqiga kale ee muhiimka ah ayaa u dhexeeya nidaamyada lahaanshaha ama tiknoolajiyada caadiga ah. Nidaamka caadiga ahi wuxuu adeegsadaa hab maamuuska isgaarsiinta, oo waxaa jira soo saarayaal badan oo soo saara badeecado awood u leh inay isla fahmaan isla rakibaadda. Tani waa kiiska heerka KNX (midka ugu badan looga isticmaalo Yurub), LonWorks (Ameerika) ama X10 (oo adeegsada qulqulka hawada ee shabakadda korantada wallow aan aad looga isticmaalin Spain).
Ku saabsan nidaamyada lahaanshaha, soo saare kastaa wuxuu adeegsadaa hab maamuus u gaar ah isgaarsiinta, taas oo, iyo markasta oo ay si aad ah isugu beddelayaan xagga moodooyinka la jaangooyay.
Waqtigan xaadirka ah, waxaa xiiso leh in sidoo kale la muujiyo xalalkii ugu dambeeyay ee noocyada kale ee shirkadaha adeegga, sida ay tahay xaaladdu Tufaax leh HomeKit ama Google Home.
Noocyada xallinta, xilligan oo ah kuwo istiraatiijiyad badan u leh shirkadda noocan ah, waxay bixiyaan astaamo yar-yar oo guriga jihaysan, oo ku saleysan isgaarsiinta Wi-Fi si loola xiriiro alaabooyin qaarkood oo awood u leh in lagu xakameeyo barnaamij. Laakiin xilligan, looma tixgelin karo inay ka jawaabi karaan baahiyaha rakibidda otomaatiga guriga ee isku dhafan dhammaan tas-hiilaadkeeda.
Maxay ku xiran tahay rakibidda otomaatiga guriga?
Caqli ahaan, si aan uga jawaabno su'aashan, waa inaan marka hore dib ugu noqonaa qodobkii hore si markaa, iyadoo kuxiran nidaamka la doortay, tixgeli rakibida Hal wado ama mid kale.
Marka laga hadlayo nidaamyada fiilooyinka leh, waxay u baahan yihiin kaabayaal dhaqaale ducting iyo fiilooyinka caadiga ah, taas oo leh faa'iido darrada baahida loo qabo in la fuliyo ceyrsashada iyo shaqada korantada lagu daro. Laakiin sidaas darteed, waxay sidoo kale bixiyaan kalsooni aad u badan.
Marka laga hadlayo nidaamyada fiilooyinka, shaqooyinkani muhiim ma aha Waxyaabaha lagu daro, laakiin waxay muhiim u tahay helitaanka buuxda, daboolid si habeysan loo qorsheeyay si loo yareeyo xoog-yaraantooda.
Qiimaha rakibaadda kala duwanaan weyn oo kuxiran astaamaha iyo qalabka ee dhismaha laga hadlayo, markaa way adag tahay in la bixiyo qiyaas qiyaas ah.
Daraasadda qaarkood, waxaa lagu soo gabagabeeyey in celceliska kharashka rakibidda nidaamka otomatiga guriga uu yahay 3% kharashka dhismaha laftiisa.
Kuwani waa qaar ka mid ah sheekooyinka guusha ee nidaamka otomatiga guryaha lagu soo daray.
Midka ugu horreeya waa dallacsiinta guryaha leh otomaatiga guriga ee Madrid, kaas oo ku daraya nidaam xakameyn dhameystiran oo dhameystiran. Nidaamka la hirgeliyey wuxuu soo maray Heerka KNX, iyo rakibaadda guriga oo dhan waa la xakameynayaa: nalalka, qaboojiyaha, indhoolayaasha, indhoolayaasha, amniga, gelitaanka fiidiyowga, iyo maqalka.
Tusaale kale laakiin kiiskan oo ku wajahan qaybta jaamacadeed ayaa noqon doona dhismaha cusub ee BBVA, oo loo yaqaan "La Vela". Bari xarunta weyn ee xafiisku waxay mideysaa xakameynta nalalka iyo indhoolayaasha banaanka, iyada oo ujeedadu tahay kor u qaadista keydinta tamarta weyn. Rakibaaddaani waxay tixgelin siineysaa isirrada cimilada si nalalka iyo indhoolayaasha ay otomaatig u noqdaan.
Kuwaas iyagu waa faasaska ugu muhiimsan ee qaybta sida ballaadhan u otomaatiga guriga u shaqeeya, oo leh xalal badan iyo isbeddello. Waxay u badan tahay sanado yar gudahood inaan arki doono horumarka iyo horumarka, sidaa darteed waxaan u fiirsaneynaa inaan tirino.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » Guriga » Otomaatiga guriga » Xaaladda hadda jirta iyo faa'iidooyinka otomatiga guriga
Instagram horeyba waxay u leedahay tabin toos ah oo firfircoon
Sony waxay bilawday xayeysiintan xiisaha leh si loogu xasuusto Jimcaha Madow Dukaanka PlayStation